Islaan 82-jirta iyo wiil 28-jir ah oo is guursaday jaceyl kadib | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Islaan 82-jirta iyo wiil 28-jir ah oo is guursaday jaceyl kadib
Islaan 82-jirta iyo wiil 28-jir ah oo is guursaday jaceyl kadib
Posted by: radio himilo February 25, 2017
Muqdisho – Waxay yiraahdeen jaceylku malahan xad iyo soohdin. Maya yaqaan caddaan iyo madow. Mana qoro sabool iyo tanaad. Balse sheekada cajiibka leh ee ku saabsan sida 28-jir Induniisiya u dhashay uu jaceyl ula wadaagay haweeney ka da’weyn 54-sanadood markii ay si kama’ ah ugu kulmeen qadka tilifoonka dabadeedna ku heshiiyeen inay is guursadaan – tiiyoo laba reerood aysan la dhicin xiriirkaas – waxay muujinaysaa in jaceylku wali indha la’yahay.
Previous: Shiinaha: Dawo loo helay haweenka la niyad-jaba furriinka
Next: Dhageyso: Tacliinta iyo Jaceylka iyo aragtida dhalinyarada